Jaquar KUB-35021F Kubix Pillar Cock With Ext. Body: သက်သာသည့်ဈေးနှုန်းဖြင့် "တဘက်ထည့်အံဆွဲနှင့်စင်များ" ကို အွန်လိုင်းတွင် အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်လိုက်ပါ။ | Shop.com.mm
ကုန်ပစ္စည်းJaquar KUB-35021F Kubix Pillar Cock With Ext. Bodyအကြောင်း အသေးစိတ်အချက်အလက်
Jaquar အမှတ်တံဆိပ် ပိုက်ခေါင်းများကိုအသုံးပြု၍ အကောင်းဆုံးသောအတွေ့အကြုံများကို ယခုပင်ရယူလိုက်ပါ။ ၎င်း၏အရည်အသွေးပြည့်ဝမှုနှင့် ကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်ချက်များကို မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ တွေ့မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။ အခြားအမှတ်တံဆိပ်ပစ္စည်းများနှင့် Jaquar ပစ္စည်းများ၏ ခြားနားချက်မှာ အကောင်းဆုံးသောအရည်အသွေးများပြည့်ဝနေသော ပစ္စည်းကိုထုတ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက် အကြိမ်ပေါင်း ၅ ကြိမ်တိုင်တိုင် စမ်းသပ်စစ်ဆေးပြီးမှထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အပြစ်အနာအဆာကင်းပြီး ချောမွေ့ပြေပြစ်သောလုပ်ဆောင်ချက်ကို ပေးစွမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။ ပလတ်စတစ်အစား ကြေးဝါဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့်အတွက် ကျိုးပဲ့ပျက်စီးခြင်းမျိုးစိုးရိမ်စရာမရှိဘဲ စိတ်ချလက်ချအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။ အပူချိန်မြင့်မားသောအခြေအနေမျိုးတို့တွင်တောင်မှ Jaquar ပိုက်ခေါင်းများသည် ချောချောမွေ့မွေ့ဖြင့်အလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် high plating thickness ပါဝင်သဖြင့် ရာသီဥတုဒဏ်၊ ရေဒဏ် အစရှိသည်တို့၏ ဒဏ်များမှကင်းဝေး၍ အချိန်ကြာရှည်စွာအသုံးပြုနိုင်သည့် အကောင်းဆုံးနှင့်အသင့်တော်ဆုံးသော ပိုက်ခေါင်းများဖြစ်ပါသည်။ ယခုပစ္စည်းအား Shop.com.mm online shopping mall တွင် ၀ယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
1960 ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည့် Jaquar အုပ်စုသည် ရေချိုးခန်းသုံးပစ္စည်းများနှင့် ပိုက်ပိုင်းဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များကို ထုတ်လုပ်ရောင်းချနေသော အိန္ဒိယထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာ့အဆင့်မှီပစ္စည်းများကိုတီထွင်ဖန်တီးရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အစပျိုးလာခဲ့သော Jaquar သည် ယနေ့အချိန်တွင်တော့ ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်တွင် နေရာတစ်ခုကိုရရှိထားပါသည်။ ၎င်း၏ရေချိုးခန်းပိုင်းဆိုင်ရာနည်းပညာများကြောင့် လူသိများထင်ရှားပြီးဖြစ်သော်လည်း ရေပန်းစနစ်များ၊ ရေအိမ်ခလုတ်များ၊ ရေပူရေအေးစက်များ အစရှိသည်တို့ကိုလည်း ပူးတွဲထုတ်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ Jaquar သည် ၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများကို အမျိုးမျိုးသောအခန်းကဏ္ဍတို့တွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုနိုင်ရန် အဓိကရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါသည်။ အဓိကရုံးကို အိန္ဒိယတွင် အခြေစိုက်ထားတာဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင်လည်း နိုင်ငံပေါင်း ၃၀ ကျော်မှာ လည်ပတ်နေပါသည်။ ကမ္ဘာ့အဆင့်မှီရေဘုံပိုင်ခေါင်းများကို ထုတ်လုပ်ရောင်းချနေသော ကုမ္မဏီများထဲတွင် Jaquar သည်တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်ပါသည်။ ပစ္စည်းများ၏အရည်အသွေးကောင်းမွန်မှုများ၊ သူမတူသောလုပ်ဆောင်ချက်များကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလူသိများထင်ရှာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးမျိုးသောဒီဇိုင်းရွေးချယ်မှုများဖြင့် ပြည့်နှက်နေသော Jaquar သည် သင်တို့၏ရေချိုးခန်းတို့ကို ဇိမ်ခံစရာနေရာတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။Jaquar အမှတ်တံဆိပ် ပိုက်ခေါင်းများကိုအသုံးပြု၍ အကောင်းဆုံးသောအတွေ့အကြုံများကို ယခုပင်ရယူလိုက်ပါ။ ၎င်း၏အရည်အသွေးပြည့်ဝမှုနှင့် ကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်ချက်များကို မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ တွေ့မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။ အခြားအမှတ်တံဆိပ်ပစ္စည်းများနှင့် Jaquar ပစ္စည်းများ၏ ခြားနားချက်မှာ အကောင်းဆုံးသောအရည်အသွေးများပြည့်ဝနေသော ပစ္စည်းကိုထုတ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက် အကြိမ်ပေါင်း ၅ ကြိမ်တိုင်တိုင် စမ်းသပ်စစ်ဆေးပြီးမှထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အပြစ်အနာအဆာကင်းပြီး ချောမွေ့ပြေပြစ်သောလုပ်ဆောင်ချက်ကို ပေးစွမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။ ပလတ်စတစ်အစား ကြေးဝါဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့်အတွက် ကျိုးပဲ့ပျက်စီးခြင်းမျိုးစိုးရိမ်စရာမရှိဘဲ စိတ်ချလက်ချအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။ အပူချိန်မြင့်မားသောအခြေအနေမျိုးတို့တွင်တောင်မှ Jaquar ပိုက်ခေါင်းများသည် ချောချောမွေ့မွေ့ဖြင့်အလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် high plating thickness ပါဝင်သဖြင့် ရာသီဥတုဒဏ်၊ ရေဒဏ် အစရှိသည်တို့၏ ဒဏ်များမှကင်းဝေး၍ အချိန်ကြာရှည်စွာအသုံးပြုနိုင်သည့် အကောင်းဆုံးနှင့်အသင့်တော်ဆုံးသော ပိုက်ခေါင်းများဖြစ်ပါသည်။ ယခုပစ္စည်းအား Shop.com.mm online shopping mall တွင် ၀ယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
အချက်အလက်များJaquar KUB-35021F Kubix Pillar Cock With Ext. Body
အမှတ်ပေးချက် နှင့််ဝေဖန်အကြံပြုစာ Jaquar KUB-35021F Kubix Pillar Cock With Ext. Body